Ebook: Chii chinonzi Lifecycle Kushambadzira? | Martech Zone
Ebook: Chii chinonzi Lifecycle Kushambadzira?
Chipiri, February 12, 2013 Muvhuro, June 8, 2015 Jenn Lisak Golding
Chii chinonzi kushambadzira kwehupenyu? Zvinoenderana neyedu kushambadzira automation vanotsigira, hwehupenyu hwekutengesa ndewe:
… Nezvekuti masangano anofambidzana sei netarisiro uye vatengi pamatanho ese ehukama hwavo neyakagadzirwa.
Kudyidzana kwako kuri kubatsira kana kukuvadza zita rako?
Kutengesa uye kushambadza zvachinja zvakanyanya pamusoro pemakore makumi mashanu apfuura, ndoda makore gumi apfuura. Iyo fanera haina kufanana neyaive. Haisi iyo nzira yakatwasuka zvekare - kushambadzira otomatiki kuri kukuchidzira nzira yevatengi vako kuti varambe vachibatirana, asi ita sarudzo padanho ravo. Iwe uchiri kugona kuunganidza ruzivo nezve chimiro chemutengi iwe uchigara chinhambwe, zvinova ndizvo zvinogona kuve nevatengi mazuva ano.
50% yevatungamiriri vanokodzera havana kugadzirira kutenga, uye avhareji yekutengesa kutenderera yakawedzera ne33%.
Iri ebook rinotsvaga kuti nei ehupenyu hwekutengesa kushambadzira uye kushambadzira otomatiki kuri kuwedzera kunyanya kukosha muzera ranhasi. Izvo zvakare inoenda mumatanho akasiyana ehupenyu hwehupenyu hunobatanidzwa mukushambadzira kwedhijitari. Pasina kuziva kuti tarisiro yako iripi muhupenyu hwevatengi, hauzokwanise kuwana mukana wavo wekushandura maitiro ekuita navo.
Uri kushandisa yekushambadzira otomatiki software yekutevera nekubata vatengi vako? Nei uchidaro?
Tags: kutungamirira kutarisiralead alamaHupenyu hwekushambadziramarketing automationKushambadzira lifecycleKufungidziraKugonesa Kugonesa